နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Root မလုပ်လဲ မြန်မာဖောင့်ကို ဘယ်လိုချိန်းမလဲ
Root မလုပ်လဲ မြန်မာဖောင့်ကို ဘယ်လိုချိန်းမလဲ
ဒီနည်းလမ်းက Device ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Root မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။ ဥပမာ Root လုပ်ရင် warranty ပျက်ပြယ်မဲ့ device တွေပေါ့ ….
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Root မလုပ်ပဲ ချိန်းဖို့ အဆင့်တွေအများကြီးလုပ်စရာမလိုပါဘူး ..
Device ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပါ …. Command ကို run ပြီး “adb remount” ကိုရိုက်ပါ …
Zawgyi.ttf ကို DroidSans.ttf လို့rename လုပ်ထားတဲ့ font file ကို device ထဲ ကို push လုပ်ပါ ..
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ “adb reboot” command နဲ့restart လုပ်ပါ …. ဒါဆို ရပါပြီ ….
ပုံမှာပြထားတာက Eclipse မှာ ADT Plug In ကို install လုပ်ထားပြီး အဲ့ဒီကနေ push လုပ်လိုက်တာပါ
Eclipse + ADT Plug In ကို Android App တွေရေးတဲ့နေရာမှာသုံးကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ IDE install လုပ်ထားတာမရှိရင်လဲ adb ကနေ push command သုံးပြီး သွင်းနိုင်ပါတယ် ..
ကဲ reboot လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဇော်ဂျီ ကို မြင်ရပါပြီ .. စာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ IME တခုခုကို install လုပ်ပါ .. ကျနော်ကတော့ မြန်မာ IME ဆို myandroid soft keyboard ထက် frozen soft keyboard ကို ပိုကြိုက်တယ် ….း-)
ပို့စ်ရေးသားသူအမည်: သီဟ - MDroid
Posted by Hajee Than Hla Oo at 8:11 PM